Safiirka Maraykana ee Soomaaliya Mudane Stephen Schwartz oo booqasho ugu yimid Jaaliyada reer Boston. |
Safiirka Maraykana ee Soomaaliya Mudane Stephen Schwartz oo booqasho ugu yimid Jaaliyada reer Boston.
Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo booqasho shaqo ku marayay gobolada ay Soomaalidu ugu badan yihiin wadankan Maraykanka si uu ugu kuuro galo waxa ay daneenayaan in Maraykanku ka caawiyo Soomaaliya ayaa Soogaadhay Magaalada Qadiimiga ah ee Boston.
Safiirka oo casuumaad ka helay Deeqo Jibriil oo ah Haweenay u sharaxan inay ka mid noqoto Gudida u arimisa Magaalada Boston iyada oo ka tartamasa Waaxda 7aad.
Safiirka ayaa Saakadii Hore la quraacday Madaxda Magaalada isaga oo la qadeeyay Galab nimadii Jaaliyada oo isku dhan.
Safiirka ayaa ka xog waramay xaalada uu marayo wadanka Soomaaliya siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan isaga oo warbixin kooban ka bixiyay sidii ay u dhacday doorashadii bishii Febraayo ee lagu doortay Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Su’ aalihii lawaydiiyay waxaa ka mid ahaa oo mar walba soo noqnoqonasay in Dawlada Soomaaliya laga kaalmeeyo in loo dhiso Ciidan Qaran. Balse safiirka ayaa ku celcelinayay in ay lagama maarmaan tahay in la helo ciidan qaran balse ay arintaasi u taalo dadka Soomaaliyeed balse ay dawlada Maraykanku diyaar u tahay inay Soomaaliya ka caawiso dhinacyo badan sida waxbarashada, Caafimaadka, iyo dhisida Haykalka dawladeed ee haayadaha dastuuriga ah.
Mar la waydiiyay sababta ciidamada Itoobiya iyi kuwa Kiiniya loo dhisayo ee loo kaalmeenayo si ay Soomaaliya u xasiliyaan maxaa kuwada Soomaaliya loo dhisi waayay? waxa uu yidhi Safiir Stephen Schwartz Soomaaliya uma baahna ciidan qaran balse waxay u baahan tahay ciidamo amaanka suga iyo kuwo sirdoon si loo nabadeeyo dalka taasaana anagu ka caawinanaa dawlada Soomaaliya balse hadii Soomaalidu iyagu dhisanayaan ciidamo qaran waa arin iyaga u taal.
Dhinaca kale Su’aalaha ugu xiisaha badnaa ayaa ahayd markii la waydiiyay waxa uu kala kulmay safarada uu kula kulmayo Jaaliyadaha Soomaalida ee uu safarka kusoo maray ayuu safiirku yiri waxay ii tahay arin aan aad u daneenayo waayo waxaan ogaanaya waxa aad u baahan tihiin isaga oo waliba ku tirtirsiiyay Jaalida inay fadhiga ka kacaan oo ay warqado u qoraan Siyaasiyiintooda u matala dawlad Gobaoleedada iyo dawlada dhexe ee Maraykanka.
Safiirka ayaa yidhi Shaagii jiiqjiiqleeyay ayaa la olyeeyaaye waxa aad doonasaan inaan Soomaaliya ka qabano u sheega siyaasiyiinta laga soo doorto deegaanada aad dalka ka dagan tihiin. Taasi oo keenasa inaan helno waxa aan u baahanahay isla markaana aan wax wayn ka qabano xaalada Siyaasadeed iyo Ishtimaaci ee Soomaaliya.
Safiirka ayaa la’ waydiiyay inuu ka qaado cunaqabataynta Saaran Soomaaliya ee dhinaca socdaalka isaga oo yidhi hadii aan awoodaa leeyahay anoo safiira ayaa la’saaray markii horaan diidi lahaa balse Jaaliyada u sheegay inay tahay arin ay kala xaajoon karaan Siyaasiyiinta u matasha Washington DC.